COVID-19: Maitiro Ekudzivirira Coronavirus - Fitness Rebates
musha » Blog » COVID-19: Maitiro ekudzivirira iyo Coronavirus
Iwo ma coronaviruses, akapfupikiswa saCov, iboka rakakura rehutachiona hunogona kutapura mhuka nevanhu. Muvanhu, ivo vanokwanisa kuburitsa dzakasiyana mhando dzezvirwere zvekufema, kubva kune yakajairwa kutonhora kusvika kwakanyanya pneumonia (hutachiona hutachiona). Ruzhinji rwemavhairasi aya harwudzi uye vane marapirwo aripo. Kunyangwe zvakanyanya, vazhinji vevanhu vakatapukirwa nerudzi rwecoronavirus muhupenyu hwavo, kazhinji panguva yehudiki hwavo. Kunyangwe ivo vachiwanzo kuve kazhinji munguva inotonhora mwaka, kunge matsutso uye nguva yechando, unogona kuvabata chero nguva yegore. MaCoronaviruses anodomwa korona-senge spikisi pamusoro payo. Coronaviruses ane mana makuru epasi sub mapoka anozivikanwa se alpha, beta, gamma, uye delta.
Zvakajairika Human Coronaviruses
Mumakore makumi maviri apfuura, coronavirus yakakonzera kubuda kwedenda katatu kunosanganisira:
Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome): Chakanga chiri chirwere chekufema chakatanga muChina muna2002 uye chakazopararira nepasi rese, kuchikanganisa vanhu zviuru mazana masere uye kukonzera kufa kwakapfuura mazana manomwe. Hapana nyaya yeSARS-CoV yakanyoreswa kubvira 8000.
MERS (Middle East Respiratory Syndrome): Iyo yekutanga MERS-CoV nyaya yakanyorwa muSaudi Arabia muna 2012, ikonzera mazana maviri nemakumi mana nemakumi mana nemakumi manomwe. Mhosva yekupedzisira yakaitika munaGunyana 2400.
COVID-19 (chirwere cheCoronavirus 2019): Mhosva yekutanga yakaburitswa muChina pakupera kwa2019. Parizvino, zviitiko zana nemakumi mairi nemakumi mairi zvataurwa uye vakanyoresa makumi mana nemakumi mana nevashanu vakafa. Sangano reWorld Health Organisation (WHO) neChipatimendi cheDziviriro yeZvirwere (CDC) vari kuumba hurongwa hwakasimba hwekudzivirira uye chirongwa chekudzivirira.
Iyo COVID-19 novel coronavirus ihosha yekufema iyo inotangira kubva kune inotonhorera yakajairika kune pneumonia inotyisidzira upenyu. Yakatanga kuzivikanwa muWuhan, China muna Zvita 2019 mune kubuda uye yakapararira pasi rese.
Izvo zvinofungidzirwa kuti kwakabva iyi coronavirus kunobva kune mhuka yemhuka. Kumwe kuferefetwa kunoratidza kuti kwakabva kunyoka, vamwe vachipokana kuti yakabva nematsotsi. Chero nzira, yakaendeswa kuvanhu. Vanhu vanogona kupfuudzira hutachiona kune vamwe nekufema kunaya (kukosora nekutsvanzvadzira) mukamita 6 metres. Iwe unogona zvakare kutapukirwa kana ukabata pamusoro pechinhu chakarambidzwa chakasvibiswa nemadzi emuviri wemunhu ane hutachiona (mate, kuyerera kwemhino, nezvimwewo).
Hutachiona hwekufema zvakanyanya uye hunoburitsa zvinotevera zviratidzo: fivha, kutsokomora, kuyerera, kuputika kwemhino, musoro, kupera simba, kusagadzikana kwakawanda uye kufema kunonetsa kufema. Zviratidzo zvacho zvinogona kuva zvakapfava, zvine mwero, kana kuti zvakanyanya. Kana ikasarapwa zvakafanira, zvinogona kutungamira pakurwara kwakakomba kwepamapapu, kukundikana kwemazhinji, uye kufa.
Kubva nhasi, hapana mushonga wakagadzirwa kudzivirira COVID-19. Nzira yakanakisa yekudzivirira chirwere ndechekudzivirira kuratidza hutachiona. Ona iyi vhidhiyo yakakosha kuti udzidze zvakawanda nezvekuti ungadzivirira sei kuratidzwa panguva yedenda.
Pamusoro pekutarisa vhidhiyo, ita shuwa kuti utevedze aya marongero kubva kuCDC. CDC yakurudzira aya anotevera nzira dzezuva nezuva dzekuchengetedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi:
Kunzvenga kushamwaridzana nevanhu vanorwara.
Dzivisa kubata maziso ako, mhino uye muromo.
Gara pamba kana uchirwara uye shandisa kumeso kumeso kudzivirira kupfuurira kupararira kune vamwe.
Dhavhara mhino nemuromo wako netuweti tunoraswa kana uchinge uchirwara kana kutsvedza uye wozoukanda mumarara. Iwe unogona kufukidza muromo wako newhite yako kana iwe usina muswe unoshanda.
Geza maoko ako nguva dzose nemvura nesipo kwemasekondi makumi maviri, kunyanya mushure mekuenda kuimba yekugezera, usati wadya, uye mushure mekutsamwa kana kutsvedza. Kana iwe usina mvura nesipo panguva ino, unogona kushandisa sanitizer yemawoko iyo inokwana 20% doro. Unofanira kugara uchigeza maoko ako kana achinge aine tsvina.
Cheneswa uye gonesa zvinhu uye zviso zvakabatwa nguva pfupi yadarika. Unogona kushandisa disinfecting spray kana thauro nemvura uye nesipo.
Masangano ezvehutano anokurudzira kurega nzendo dzisina kukosha kuChina kana kuSouth Korea.
Kana iwe waenda kune chero nyika uye ungangove wakaratidzwa kune munhu ane hutachiona, iwe unofanirwa kuongororwa kwemazuva gumi nemana anotevera kana chimwe chezviratidzo chatanga kuoneka.
Ramba wakadzikama uye edza kutevera izvo zvinongedzo kuti uderedze njodzi yekutapukirwa.